Ogaden News Agency (ONA) – Halganka Ogaadeenya iyo Xumaanta Guumaysiga Xabashida
Posted by ONA Admin	/ May 16, 2013
HCBQ – “Waxaan ku noolahay duni taariikh cusub ay qormayso, taariikhdii horena ay duugoobayso ama la dafirayo. Waxaan ku noolahay duni cidii tabar yar ama la tunjileecsado aan loo turayn. Waxaan ku noolahay duni aan loo danqan cidii aan dano gaara iyo wax loogu xisho laga lahayn. Waxaan ku noolahay duni xeerar in wax lagu dulmo loo dajistay, balse macnaha ay xeerarku wataan lagu sheegayo in wax lagu badbaadiyo taasoo aan run ahayn. Waxaan ku jiraa duni xaqiraada iyo dulmiga lagu macneeyo hadba sidii la doono ama lagu saleeyo danta laga leeyahay sida ay tahay ee aan loo eegin danqansho aadaminimo. Waxaan ku noolahay duni dulmiga aadamaha lagu dhiso dawlado ama dhaqaale lagu helo. Waxaan ku noolahay duni cidii aan karaamadeeda, diinteeda, xoriyadeeda, midnimadeeda, iyo dalkeeda aan difaacan uu daadku qaadayo. Waxaan ku noolahay duni xaqii dulmi laga dhigay, dulmigiina xaq laga dhigay. Hadii xumaanti xaq laga dhigay, xaqdaradiina xaq tahay, kuwa xaqa quudhsaday waxay xaq u yeelanayaan in xumaan loo damabariyo.
Umad kasta oo dulman iyadaa ah tan masuuliyadu ka saaran tahay inay dulmiga iska dulqaado. Shacbiga Ogaadeenya ayaa ahkanlooga baahanyahay inuu kala garato cadowgiisa iyo naasaxiisa. Cadawga shacbiga Ogaadeenya waa guumaysiga iyo cid kasta oo gacansiisa. Naasixiisuna waa cid kasta oo gacan siisa, kuna taageerta, maskax, maal iyo maado kasta oo wax tar leh, isla markaana, la-qaybsata dareenkooda ku wajahan wakhtigan xaaladaha adag ee halgan iyo cadaadiska guumaysi ee uu shacbiga Ogaadeenya ka halgamayo.” Qoaraaga Kitaabka.
Kitaabkan cusub oo cinwaankiisu yahay ka heli – Halganka Ogadenya iyo Xumaanta Gumaysiga xabashida – waxaad ka heli doontaan xog badan oo taariikhda dalka, siyaasadaha caalamka ee ku wajahan dalkeena, iyo xad-gudubka uu gumaysiga ka wado dalkeena. Kitaabkan oy aqoonyahan xog-ogaal ah soo saareen ayaa goordhow soo gaadhi doona jaaliyadaha iyo dalka gudihiisaba.